वान डे सिरिजः विराट र गेल नयाँ कीर्तिमान नजितक, पूरा गर्न सक्लान् आज? - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः विराट र गेल नयाँ कीर्तिमान नजितक, पूरा गर्न सक्लान् आज?
काठमाडौंः भारत र वेस्टइन्डिजबीच दोस्रो एक दिवसीय खेल आइतबार साँझ सवा सात बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। पहिलो खेल वर्षाका कारणा नतिजाविहीन रहेकाले दुवै टीमले पोर्ट अफ स्पेनको क्विन्स पार्क ओभल मैदानमा हुने यस खेल जित्न जोडबल गर्ने छन् ।
यस खेलमा वेस्टइन्डिजका दिग्गज खेलाडी क्रिस गेल र भारतका कप्तान विराट कोहलीले केही उल्लेखनीय कीर्तिमान बनाउन सक्ने अनुमान क्रिकेट पण्डितहरूको रहेको छ। यस खेलमा दुवै टीम विश्वकपको निराशाजनक प्रदर्शनलाई सुधार्ने प्रयासमा रहने छन् ।
टी-ट्वेन्टी शृंखलामा ०-३ ले हार बेहोरेको वेस्ट इन्डिजका लागि यो खेल राम्रो मौका हुनेछ । यो सम्भवतः क्रिस गेलकाे अन्तिम शृंखला पनि हो । यस अर्थमा उनले पनि यस खेललाई यादगार बनाउने कोसिश गर्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस विराटले किने क्यू–८, कति पर्छ मूल्य?
गेलले यस शृंखलाबाट ब्रायन लाराको एउटा रेकर्ड तोड्ने अवस्थामा रहेका छन् । हाल उनले लाराकै बराबर अर्थात् २९९ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । आजको खेलका साथै गेलले वेस्टइन्डिजको तर्फवटा सर्वाधिक एक दिवसीय खेल खेल्ने लाराको किर्तीमानलाई पछाडि पार्ने छन् ।
त्यस्तै गेल यस खेलबाट लाराको अर्को रेकर्ड पनि तोड्न सक्नेछन् । लाराले २९९ खेल खेलेर १०४०५ रन बनाएका छन् भने गेल उनीभन्दा मात्र ८ रनले पछाडि छन् । उनले आजको खेलमा लारालाई पछी पार्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ।
याे पनि पढ्नुस विराटले बनाए नयाँ कीर्तिमान, कसको रेकर्ड ताेडे?
गेलले पहिलो एकदिवसीय खेलमै यो रेकर्ड तोड्ने अनुमान गरिएको भएपनि त्यसो भने हुन सकेन। उनले त्यस खेलमा ३१ बलमा ४ रन मात्र बनाउन सकेका थिए ।
उता विराट कोहलीले पनि आजको खेलमा विराट कोहलीले पनि एउटा महत्वपूर्ण रेकर्ड बनाउने सम्भावना छ । उनले १९ रन बनाउन सके भने मात्रै जावेद मियाँदादको रेकर्ड तोड्न सक्ने छन् ।
मियाँदादले वेस्टइन्डिजविरुद्ध ६४ खेलमा १९३० रन बनाएका छन् । विरत कोहलीले वेस्टइन्डिजविरुद्ध ३४ खेलमा ३३ पारी खेल्दै १९३० रन बनाएका छन् ।
आजको खेलमा भारतीय ब्याट्सम्यान श्रेयस अय्यरलाई यस पटक प्लेइङ- ११ मा राखिने पक्का भएको छ। टी-ट्वेन्टी खेलहरूमा ड्रेसिङ रूमबाहिर नआएका अय्यरका लागि यो खेल टीममा चौथो स्थानमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्ने प्रयास पनि हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस क्रिस गेललाई इपीएल खेल्न ललितपुरको प्रस्ताव
उनी पहिलो एक दिवसीयमा पनि टीमको शीर्ष एकादशमा रहेका थिए । दोस्रो खेलमा टीमले खासै फेरबदल गर्ने सम्भावना नरहेकाले अय्यरका लागि मौका रहेको छ ।
त्यस्तै बलिङतर्फ पनि मोहम्मद शमीले पहिलो म्याचमा तीन ओभरमा मात्र पांच रन दिएका थिए । तर युवा बलर खलिल अहमदले ३ ओभरमा २७ रन दिए यस्तोमा प्रदीप सैनीलाई टीममा प्रवेश गर्ने मौका छ ।
ट्याग्स: क्रिस गेल, विराट कोहली, वेस्ट इन्डिज भर्सेस भारत